Kiisaska Coronavirus ee Dalka Hindiya oo kor u dhaaftay 9 milyan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Kiisaska Coronavirus ee Dalka Hindiya oo kor u dhaaftay 9 milyan
Kiisaska Coronavirus ee Dalka Hindiya oo kor u dhaaftay 9 milyan
Tan iyo markii uu safmarkani ka bilowday Hindiya Tirada guud ee kiisaska coronavirus ee dalkaasi ayaa kor u dhaaftay 9 milyan sida ay sheegeen waaxda tiri koobka maanta oo jimca ah.
Si kastaba ha noqotee kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee Hindiya waxaa laga dareemayay hoos u dhac toddobaadyadii ugu dameeyay iyadoo hadda tirada guud ee kiisaska ay taagan tahay 0.6% tirada dadka Hindiya oo ah 1.3 bilyan.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa soo warisay 45,882 oo infekshan cusub ah iyo 584 dhimasho 24-kii saac ee la soo dhaafay. Tirada dhimashada ee Hindiya tan iyo markii uu faafay cudurka ayaa ka badan 132,000.
Hindiya ayaa kaalinta labaad kaga jirta dadka uu saameeyay cudurka covid-19 halka sedexaad ay ku jirto brazil iyo Maxsiko oo kalinta afaraad fadhisa.
Next articleMadaxa WHO oo beeniyay eedeyntii uga timid Itoobiya